“Ilkeheenu ka Seefsan Kuwii Odayaasha” Xildhibaan Bukhaari – Abdilahi Dualeh
“Ilkeheenu ka Seefsan Kuwii Odayaasha” Xildhibaan Bukhaari
Posted byDualeh June 7, 2021 Posted inUncategorized
Aniga iyo Xildhibaan hore Abwaan Bukhaari, Nov 11, 2018, Dugsiga Sare ee Aayatiin
Waa aniga iyo wll qiimo badan Abdiwahab Bukhari. Waa abwaan, macallin iyo saaxiib kal-furan oo aan jeclaa in badan in aan waqti la qaato mar kasta oo aan kulano. In muddo ah ayaan macallimiin ka wada ahayn dugsiga sare ee Aayatiin ee Borama.
Cabdulwahaab anaga oo dugsiga ka wada shaqayna ayuu ka mid noqday xildhibaannadii ku guulaystay doorashooyinkii golaha deegaanka ee Borama ee 2012 kii.
Waxa kale oo uu ka mid ahaa raggii damacu kaga jiray inay isu sharraxaan mayor-ka magaalada ee waqtigaa. Run ahaantiina waan la jeclaa, Allese ma qaddarin.
Waxa xasuustayda aan ka gu’in hadal uu nagu yidhi maalmahaas aniga iyo macallimiintii kale ee dugsiga. Waxa uu nagala hadlayay kulankii ugu horreeyey ee uu golahaasi yeesho doorashadoodii ka dib.
Haddii aan idin xasuusiyo, golahaasi wuxu u badnaa dhallinyar. Waxaana ka horreeyey gole-deegaan oo odayaal u badnaa.
Golahaa cusub dadka magaaladu rajo wayn ayay ka qabeen. Waxaana la filayay in magaalada Boorama ay ku tallaabsan doonto hore-u-mar aad u wayn, maadaama rag dhallinyaro u badan, aqoonyahanno ah, aadna u firfircooni bedeleen odayaal inta badan lagu eedayn jiray ay fadhiid noqdeen.
Haddaba, waxa aan xildhibaanka waydiinay kulankoogii u horreeyey waxa ay ka wada hadleen. Sidan ayaanu noogu jawaabay, anigoo isku deyaya in ereyadii xildhibaan hore, Bukhaari, sidoodii u wada xasuusto, idiinkuna soo gudbiyo:
“Kulanka waxa aanu kaga wada hadallay sidii aanu u waajihi lahayn xilka lana saaray. Xildhibaan kastaana wuxu dhiibtay ra’yigiisa. Aniguna talo ayaan ka dhiibtay. Waxa aanan idhi, ‘Sida aan wada xusnay, waxa aan nahay rag dhallinyaro ah. Haddii aan u midowno in aan wax qabano, runtii waxa aynu u shaqayn karnaa si aanay u shaqayn karaynin odayadii inaga horreeyey. Dhanka kale, haddii aan u midowno in aan wax cuno, ilkeheenu waa ka seefsanyihiin, kana awood badanyihiin kuwii odayada. Waxaanan wax u cuni doonaa si aanay wax u cuni jirin!’“
Xildhibaan hore Abwaan Bukhaari
Maanta odhaahdaasi waxa ay ku habboontahay in la maqashiiyo mar kale golaha cusub ee Borama dooratay. Waxaana xusuusin mudan, golahaa ay bedeleen wixii fursad ay lumiyeen in ay maanta tahay wax taariikhda u galay, oo aanay dib u sixi karin. Wixii ay qabteena uu sido kale taariikhda u galay. Maantase golaha cusubi,waxa ay haystaan fursad ay ku qoraan taariikh cusub oo lagu xasuusto sannaddo badan. Laba midkood uunbaanay noqon doontaa:
1) In la mahadiyo, lagana yaabo in berrito-ka-maalin hadday doorasho danbe isku soo taagaan in ay ku guulaysta guulo la yaableh oo aan kala hadh lahayn.
2) In la hiifo lana haaraamo, doorasho danbena iska daaye, dadka jidka ku arkaa haddiiba aanay ku qaylyin ay ugu yaraan qalbiyada ka habaaraan!
Waxa xusid mudan in macallimiinta maalintaa aan wada joognay uu ka mid ahaa xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Caateeye( Talan Ateye ) oo ah xildhibaanka hadda codka ugu badan ku guulaystay golaha deegaanka ee Borama. Isagaanan filayaa inu farriintan gaadhsiiyo golaha cusub, oo intooda badan aan asxaaba ku nahay bartayda Facebook.
Published by Dualeh
I am Somali. I love sharing Somali traditional stories and folktales and other personal experiences and ideas with you on my blog here.	View more posts
BADHEEDHAHAYGA DOORASHADA EE GOLAHA DEGAANKA EE BOORAMA
Abdilahi Dualeh, Blog at WordPress.com.